Izinqubo zokuhlanza i-ultrasonic zisebenza kahle kakhulu ekuhlanzeni okunezinsiza ezingapheli ezifana nezintambo, izintambo, izinduku kanye namaphrofayela aqhubekayo.
Ukuze uhlole ama-ultrasonic yokuhlanza imiphumela kulwazi lwakho oluqondile nokungahlambuluki, i-Hielscher inikeza iselula ye-ultrasonic yokuhlanza test box.
I-ultrasonic wire yokuhlanza uhlelo lokuhlola ihambisana nokuhleleka futhi ingahlanganiswa kalula emgqeni wakho wokukhiqiza.
Ukuhlolwa Okungenabungozi nge-Ultrasonic Wire Cleaning Testset
Uhlobo oluthile lwezinto zokwakha kanye nezidakamizwa zidinga amandla okuhlanza. Ukuze kuhlolwe imiphumela ye-ultrasound ekuphatheni okuqhubekayo nokunye okusele, i-Hielscher Ultrasonics ithuthukise ukuhlolwa kwe-wire set yokuhlola (bheka isithombe ngezansi). Lokhu kuvumela ukuhlola imiphumela ye-ultrasonic kulwazi oluqondile kanye nezinsalela ezithile. Njengoba yonke imiphumela ingafakwa ngokulinganayo, lokhu kusetjenziswa kuhle kumilingo ekhonjisiwe. I-testbox yokuhlanza ucingo ingahlanganiswa kalula – ngqo emgqeni wokukhiqizwa kwamakhasimende.
Ukuhlolwa okunamandla kwenqubo yokuhlanza kanye nokuhlolwa nokusebenza kahle kwezilungiselelo ze-ultrasonic, i-Hielscher inikeza ukusetshenziswa kwayo inqubo ye-ultrasonic lab.
Abasebenzi abasebenza isikhathi eside baseHielscher banikeza ukubonisana ngokujulile, ukuqeqeshwa, nokugcinwa kwezinsizakalo.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic wire yokuhlanza kanye nezinhlelo zethu ezihlukahlukene ze-ultrasonic zokuhlanza inline!
Uhlelo Lokuhlola Lokuhlanza Izintambo ze-Ultrasonic
Ukuhlanza okunamandla okunamandla nge-Power Ultrasound
Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic kungenye indlela ephathelene nokuhlanzwa kwemvelo yokuhlanzwa kwezinto eziqhubekayo, njenge-wire kanye nekhebula, amateyipu noma amashubhu. Umphumela we cavitation okhiqizwa amandla ultrasound kususa izinsalela ze-lubrication njengamafutha noma amafutha, amasobho, ama-stearates noma uthuli. Ngaphezu kwalokho, izinhlayiya zokungcola zihlakazeka emanzini okuhlanza. Ngalokho, ukunamathela okusha kwento okumele ihlanjululwe kugwenywe futhi izinhlayiya zixotshiwe.
Njengoba inqubo yokuhlanza ivame ukusizwa emgqeni wokukhiqiza ucingo, ukuhlanza okusetshenzisiwe okusebenza kahle kudlula ukuhlanza kwendabuko ngezimo ezihlukahlukene. Ukuhlanzwa kwamakhoyili wocingo kuma-asidi e-asidi yiyona inqubo eqhubekayo ye-batch - isikhathi sokudla namakhemikhali. Ukwengeza, kuhilela izindleko ze-acids ezingozi zemvelo.
Ukuhlanza ucingo ku-intanethi nezinye izinyathelo zokukhiqiza kuholela ekukhiqizeni okuqhubekayo. Ngaphezu kwalokho, ukusheshisa ukuhlanza ngokuvamile kuvumela inkampani ukuthi isebenzise ngokugcwele umthamo womugqa wonke.
Uhlelo lokuhlola lokuhlanza izintambo lulungele ukuhlolwa kanye nezinqubo zokuhlanza ezincane.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Wire Cleaning:
Indlela eqinisekisiwe yokuhlanza izinga eliphezulu
ukufakwa okulula nokubuyisela emuva emigqeni yokukhiqiza ekhona
ukuqina okukhulu, ukugcinwa okuphansi
Ukusebenza kwe-24/7, ukuzenzekelayo okugcwele
ubungane bemvelo: ayikho noma amakhemikhali amancane
amanzi aphansi nokusetshenziswa kwamandla
ukuqhutshwa kwezinga eliphezulu
I-Ultrasonic Wire Cleaning SOnotrode yemiphumela yokuhlanza enamandla
Izinzuzo ze-Ultrasonic Wire Cleaning
Enye inzuzo ye-ultrasonic wire yokuhlanza okuchazwe ngenhla yi-in-line yokuhlanza. Uma kuqhathaniswa nokuhlanzwa kwe-batch (njenge-acid yokuhlanza okugeza) izindleko zinciphisa ngokuncipha ngezinyathelo zokusebenza ezidingekayo. Ukwengeza, ukuhlanza okuqhubekayo oku-inthanethi kunciphisa inani lokuphazamiseka kwinqubo yokukhiqiza kanye nezindleko zokuyeka nokuqala umugqa wokukhiqiza ngemuva kokuphazamiseka ngalunye.
Amandla kagesi anamuhla aphezulu-power ultrasonic yokuhlanza amasistimu asebenza ekuhlanzeni izintambo ezivela kumonakalo ngesivinini sezingu-30m / s. Njengoba ukuhlanza kuvame ukuhlushwa, lokhu kuzokwandisa umthamo wokukhiqiza womugqa wonke futhi kube nokukhiqizwa okungenzeka ngonyaka.
Enye inzuzo ibangelwa ukuhlunga okuqhubekayo kanye nokwaziswa kwamafutha okuhlanza amanzi. Lokhu kusebenza ukubamba ikhwalithi yokuhlanza ezingeni eliphakeme njalo. Lokhu kubaluleke ikakhulukazi emkhiqizweni wezinga eliphezulu.
Ngaphezu kwalokho, i-high-power ultrasound ivikela amakhemikhali okuhlanza. Ngakho-ke, izindleko zinciphisa ukuthenga nokulahla ukuhlanza iziphuzo. Izihlungi kanye nama-oil skimmers zandisa le nzuzo ngokukhulisa isikhathi sokusebenzisa. Izimo zomoya ezingcono zabasebenzi ziwumphumela wokuhlushwa okuphansi kwamakhemikhali. Kanye nokusetshenziswa kwamandla aphansi kanye nokusetshenziswa okunamandla kwamandla namakhemikhali lokhu kuhle kakhulu embonweni wezemvelo, futhi.
I-ultrasonic wire yokuhlanza uhlelo ngokwayo yinto yokuphila isikhathi eside nemishini enesondlo esincane kanye nezindleko zokusebenza.